Ibhafu yabucala kunye negumbi lokulala kufutshane nedolophu yaseCleveland
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguJay
Le yindlu yabucala enebhedi yokumkanikazi kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo. ITV enescreen esicaba, intambo, kunye ne-intanethi engenazingcingo. Ikhitshi epheleleyo iyafumaneka ukuze isetyenziswe kunye newasha kunye nesomisi ukuba ufuna njalo.
Iitawuli ezimbini kunye neWash Rags
Idesika yoMsebenzi kunye noSihlalo
Isininzi seNdawo esiValekile
Indawo yokupaka ngaphandle kwesitalato
Isitshixo sabucala-ngaphantsi kwesitshixo segumbi lakho
Ikofu yasimahla, iswekile, njl.
Ngeveki/ngenyanga umhambi wamkelekile!
Kufuphi neAmazon Hub. Imizuzu eyi-8 ukusuka edolophini.
Indawo elula, iGordon Square, edolophini ukusuka kwi-90 yimizuzu eyi-7 kuphela ngaphandle kwetrafikhi kwaye malunga nemizuzu eyi-14 ngetrafikhi. I-Edgewater Park ingaphantsi kweemayile ezi-2 kwakhona. ILakewood ikwayimizuzu esi-7 yokuqhuba okanye ukukhwela i-Uber.
4.83 ·Izimvo eziyi-80
4.83 · Izimvo eziyi-80
Imivalo emikhulu kunye neendawo zokutyela ezihamba kunye nomgama wokuhamba ngebhayisekile eGordon Square. Ukuba ulungele ukuhamba ukuya echibini, uninzi lweendwendwe zethu zikhetha le ndlela, ekunika iimbono ezintle zeLake Erie e-Edgewater park. Ukungqonge la ndawo inye ukwanayo neWayini entle kunye nebhari yeMartini kunye nendawo entle yepizza ebizwa ngokuba yiProjekthi yePizza.
Road warrior who also runs AirBnBs in Cleveland.
Ndihlala ndifumaneka ngetekisi okanye umnxeba. Ndidla ngokubakho kusasa nangokuhlwa xa ndidlula ukuze ndijonge yonke into.